COVID_19 လား……………. အပူလျှပ်တာလား……………… - Hello Sayarwon
COVID_19 လား……………. အပူလျှပ်တာလား………………
ပူပြင်းတဲ့နွေရောက်လာရင် အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကတော့ အပူလျှပ်တာပါ။ အခုလိုချိန်မှာ ကပ်ရောဂါ COVID_19 ကိုလည်း စိုးရိမ်နေရချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်မြင့်တာကို လူတိုင်း စိုးရိမ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အပူဒဏ်ကြောင့် အပူလျှပ်ပြီး ကိုယ်ပူနေတာလား COVID_19 ကြောင့် ကိုယ်အပူချိန်မြင့်နေတာလားဆိုတာကို သေသေချာချာလေး သိစေဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် အသိပေးပါရစေ။
နွေအပူချိန် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီကာလမှာ အပူလျှပ်တာက အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အပူချိန်မြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ နေပူထဲမှာ အကြာကြီးနေမိမယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း နေပူထဲမှာ လုပ်မိတာ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာ အပူလျှပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပူလျှပ်တယ်ဆိုတာက အပူဒဏ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့တာ၊ ပူပြင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် က ပုံမှန်ရှိသင့်တာထက် အရမ်းမြင့်တက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ့။
အပူလျှပ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူချိန် ၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ဒါမှမဟုတ် ဒီအပူချိန်ထက် မြင့်တက်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နွေရာသီမှာ အများဆုံး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။
အပူလျှပ်တဲ့အခါမှာ အရေးပေါ်ပြုစုကုသမှု လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မကုသဘဲ သတိလက်လွတ် ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အပူလျှပ်တာကြောင့် ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ကျောက်ကပ်နဲ့ ကြွက်သားတို့ဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး။ ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ အသက်သေဆုံးတာမျိုး အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (သို့မဟုတ်) ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက် ပိုများနေမယ်
အရေပြားတွေ ပူနေမယ်၊ ခြောက်သွေ့နေမယ်၊ နီမြန်းနေမယ်။
အပူလျှပ်တာက အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
အပူလျှပ်တဲ့သူကို နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိအောင် အရိပ်အောက်တစ်ခုခုကိုရွှေ့ပါ။
အဲယားကွန်း ဖွင့်ထားတဲ့ အခန်း ဒါမှမဟုတ် အေးမြတဲ့ နေရာတစ်ခုခုကို ရွှေ့ပေးပါ။
သက်သောင့်သက်သာအနေအထားမျိုးမှာ လှဲလျောင်းနေနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
ရေဖြန်းပေးပါ။ ရေခဲဝတ် ကပ်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ချိုင်းကြား၊ လည်ပင်းနဲ့ပေါင်ကြားနေရာတွေကို ရေအေးဝတ်၊ ရေခဲအိတ်တို့ ကပ်ပေးပါ။
ရေတိုက်ပါ။ အုန်းရည်လိုမျိုး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ အရည်တွေ တိုက်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ အန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်မတိုက်ပါနဲ့။
Heat Exhaustion and Heatstroke https://familydoctor.org/condition/heat-exhaustion-heatstroke/ Accessed Date 12 April 2020
Heatstroke https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-stroke/symptoms-causes/syc-20353581 Accessed Date 12 April 2020